नायिका वर्षाले भावुक हुदै मागिन माफी ! यस्तो लेखिन - सुदुर नेपाल
नायिका वर्षाले भावुक हुदै मागिन माफी ! यस्तो लेखिन
काठमाडौं ।आइतवार विहानै देखि नायिका वर्षा राउत सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचित बनिन् । नेपाल भारत सिमानाको विषयलाई लिएर उनले बोलेको एउटा अभिब्यक्तिले उनलाई विवादित बनाएको हो ।
उनको यस्तो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल विहानै देखि तातेको छ । कतिपयले उनलाई निकृष्ट शब्दमा गाली समेत गरेका छन् । आलोचित भएकी नायीका वर्षाले आफ्नो अभिब्यक्ति प्रति माफी मागेकी छन् ।
उनको इन्स्ट्राको फल्वर्स घटाउने देखि लिएर उनको फिल्म बहिष्कार गर्ने सम्मको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भएका छन् । त्यस्तो टिप्पणीको सामना गरेकी वर्षाले नेपाल मेरो जननी भुमि हुन् भन्दै फेसबुकमा यस्तो लेखिन् ।
सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक तथा शुभचिन्तक साथीहरूमा नमन
Previous Post: चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइराला बुवा-आमासँगै नेपाल आउने
Next Post: सामाजिक संजालमा आलाेचित बनेकी वर्षा राउतको समर्थनमा रिमा :यस्तो लेखिन् ?